Hormuud News Wednesday, February 21st, 2018 | 22:21
[Tuesday, February 6th, 18] :: Maxkamadda ciidamada oo xukunno dil & xabsi ku ridday rag lagu eedeeyay Qarixii Soobbe
Muqdisho (RH) Maxkamadda darajada koowaad ciidamada Soomaaliya, ayaa maanta Talaado ah waxa ay xukunno dil iyo xabsi isugu jira ku riday saddex qof oo lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen qarixii Soobbe ka dhacay 14-kii October ee sannadkii horre 2017-ka, kaasoo gallaaftay dad kor u dhaafaya illaa 500 oo ruux.
Garsoore Xasan Cali Shuure oo gacanta ku hayey galka dacwadda loo heysto ragga la xukumay ayaa maxkamadda ka sheegay in la soo gabagabeeyay dhageysiga dacwadda loo heystay shanta ruux oo labo ka mid ahna la sii daayey markii dambi lagu waayey sida uu sheegay.
Garsooraha ayaa mid-mid u dul istaagay dacwadaha lagu soo oogay shanta qof ee maxkamaddu xukuntay kuwaasoo billowgiiba lala xiriirayey qarixii argagaxa badnaa ee Soobbe ku dilay boqolaalka qof.
Garsoore Shuute ayaa sheegay Xasan Aadan Isaaq in lagu helay dambigii lagu soo oogay oo ahaa in uu abuubulay weerarkii Soobbe isla markaanna lagu xukumay dil toogasho ah, sidoo kale garsooruhu waxa uu sheegay in maxkamadda ciidamada ay xabsi daa’in ama madaxa ha ku furto ay ku xukuntay Cabdullaahi Ibraahim Xasan Absuge isagoo ah maqane.
Cabdiweli Axmed Diiriye ayaa isna lagu xukumay saddex sanno oo xarrig ciidan ah, guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Shuute ayaa xorriyadoodii dib ugu celiyey labo eedeesane ee lakala yiraahdo Mukhtaar Maxamuud Xasan Rooble iyo Cabdul Cabdi Warsame Cali kaddib markii lagu waayey eedeemihii loo heystay.
Gal dacwadeedka la xiriira dadkii loo heystay qarixii Soobbe ayaa soo socday muddo dhowr bilood ah iyadoo dhowr mar la dhageystay dacwadda arrintan.
Maxkamadda ciidamada ayaa qaadda dacwadaha la xiriira ciidamada iyo kooxaha dowladda dagaallada kula jira, iyadoo horrey sidan oo kale xukunno u riday.
posted on Tuesday, February 6th, 18
Faalladaada ku qor halkan, si aanu ugu baahino dadweynaha